အမေရိက | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 177
Cartoon Saw Ngo – Burmese Refugees & New Year Thagyan
ကာတွန်း စောငို – သင်္ကြန်မှာ ဒုက္ခတွေလည်း နှစ်ကူးမည်ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကျော်ဟုန်း ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ဒီက ဧပရယ် ချယ်ရီတွေကို မြင်ရင် ဟိုက ဧပရယ် ရွှေဝါပိတောက်တွေ သတိရ၊ ဒီက မဖြစ်ညစ်ကျယ် သင်္ကြန်ပွဲ ဝင်နွှဲရင်း ဟိုက ခမ်းနား မြို့ မသင်္ကြန်ပွဲကို တမ်းတ၊ ဒီက သင်္ကြန်ပွဲ တနွှဲမှာ ကလေးမ တယောက် ပိတောက်ခက်အတုနဲ့ ရေလာပက်တော့ ကိုယ့်လွမ်းပူ သူ့ ထံမကူးစေဖို့ယဲ့ယဲ့လေးသာ ပြုံးတုံ့ လှယ်မိရ၊ ညီမငယ်တစုက တရိုတသေ သိမ်းထားရရှာတဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီထမီနွမ်းလေးဝတ် ယိမ်းက မြနန္ဒာအတုမို့မလတ်မဆတ်လဲ အပျော်တုလေးတွေ မပျောက်စေဖို့ပျော့ဖျော့လျော့ လက်ခုပ်သံတီး အားပေးခဲ့ရ၊ ရေသန့် ဗူးမော့သောက်ရင်း သစ်ပင်ရိပ် လမ်းဘေး...
အောင်ဒင် ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၃ (ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၄၀၊ ဧပြီ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) ● လွှတ်တော်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး (က) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေ့လာသုံးသပ်ရေးအတွက် ကော်မရှင် သို့မဟုတ် ကော်မီတီများဖွဲ့စည်းရေးအဆိုကို မတ်လ ၂၀ရက်နေ့က ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်၊ ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းသင့်တယ်၊ ဘယ်သူတွေပါသင့်တယ်၊ ဘာတာဝန်တွေယူပြီး ဘယ်လောက်သက်တမ်းရှိသင့်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိသင့်တယ် ဆိုတာတွေကို ဇွန်လ ၂၅ရက်နေ့မတိုင်မီ လွှတ်တော်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အကြံပြုစာတွေ ပေးပို့ကြဖို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊ ဒီတော့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပြန်စပြီးနောက် ဇူလိုင်လ ၊ ဩဂုတ်လတွေလောက်အတွင်းမှာ အဆိုပါ ကော်မီတီ၊ ကော်မရှင်တွေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့...
ဝဉ္စနာ ဂယက် ကျော်ဟုန်း ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ဒီက ဧပရယ် ချယ်ရီတွေကို မြင်ရင် ဟိုက ဧပရယ် ရွှေဝါပိတောက်တွေ သတိရ၊ ဒီက မဖြစ်ညစ်ကျယ် သင်္ကြန်ပွဲ ဝင်နွှဲရင်း ဟိုက ခမ်းနား မြို့ မသင်္ကြန်ပွဲကို တမ်းတ၊ ဒီက သင်္ကြန်ပွဲ တနွှဲမှာ ကလေးမ တယောက် ပိတောက်ခက်အတုနဲ့ ရေလာပက်တော့ ကိုယ့်လွမ်းပူ သူ့ ထံမကူးစေဖို့ယဲ့ယဲ့လေးသာ ပြုံးတုံ့ လှယ်မိရ၊ ညီမငယ်တစုက တရိုတသေ သိမ်းထားရရှာတဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီထမီနွမ်းလေးဝတ် ယိမ်းက မြနန္ဒာအတုမို့မလတ်မဆတ်လဲ အပျော်တုလေးတွေ မပျောက်စေဖို့ပျော့ဖျော့လျော့ လက်ခုပ်သံတီး အားပေးခဲ့ရ၊ ရေသန့် ဗူးမော့သောက်ရင်း သစ်ပင်ရိပ်...
Aung Din – Articles
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် – အပုိုင်း (၁၆) အောင်ဒင် ဧပြီ ၉၊ ၂၀၁၃ (ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၄၀၊ ဧပြီ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) ● လွှတ်တော်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး (က) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေ့လာသုံးသပ်ရေးအတွက် ကော်မရှင် သို့မဟုတ် ကော်မီတီများဖွဲ့စည်းရေးအဆိုကို မတ်လ ၂၀ရက်နေ့က ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်၊ ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းသင့်တယ်၊ ဘယ်သူတွေပါသင့်တယ်၊ ဘာတာဝန်တွေယူပြီး ဘယ်လောက်သက်တမ်းရှိသင့်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိသင့်တယ် ဆိုတာတွေကို ဇွန်လ ၂၅ရက်နေ့မတိုင်မီ လွှတ်တော်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အကြံပြုစာတွေ ပေးပို့ကြဖို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊ ဒီတော့...
အိမ်ဝေး – Aung Din
အိမ်ဝေး အောင်ဒင်၊ ဧပြီ ၆၊ ၂၀၁၃ ပြန်လာမယ် အမေ… ဥဩညို တေးဆိုဖွဲ့ လွမ်းတဲ့ ဒီနွေ… ၊ အိပ်မက်မှာလေ ညနေချို ပန်းတွေပွင့်… မလွမ်းကောင်းပေမည့် ပန်းကျောင်းမှာ စာတွေသင်ဖို့ အမေအိုိုရင်ခွင်နန်းကို မြန်းဖို့မျှော်လင့်…။ ။ (၁၉၈၉ခုနှစ် မေလအတွင်းက အင်းစိန်ထောင်၊ အထူးတိုက်၊ အခန်း အမှတ် ၁ ရဲ့ နံရံမှာ ရေးခြစ်ခဲ့တဲ့ကဗျာ၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ရက်နေ့မှာ မင်းကိုနိုင် ကျေးဇူးနဲ့ ပြန်လည်ရရှိပါတယ် – အောင်ဒင်) No tags for this post. Related posts No related posts.
Aung Din – Home Away
အိမ်ဝေး အောင်ဒင်၊ ဧပြီ ၆၊ ၂၀၁၃ ပြန်လာမယ် အမေ…ဥဩညို တေးဆိုဖွဲ့လွမ်းတဲ့ ဒီနွေ… ၊ အိပ်မက်မှာလေညနေချို ပန်းတွေပွင့်… မလွမ်းကောင်းပေမည့်ပန်းကျောင်းမှာ စာတွေသင်ဖို့အမေအိုိုရင်ခွင်နန်းကိုမြန်းဖို့မျှော်လင့်…။ ။ (၁၉၈၉ခုနှစ် မေလအတွင်းက အင်းစိန်ထောင်၊ အထူးတိုက်၊ အခန်း အမှတ် ၁ ရဲ့ နံရံမှာ ရေးခြစ်ခဲ့တဲ့ကဗျာ၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ရက်နေ့မှာ မင်းကိုနိုင် ကျေးဇူးနဲ့ ပြန်လည်ရရှိပါတယ် – အောင်ဒင်) No tags for this post. Related posts No related posts.
ဟောင်းယွန်း သစ်တဖန် – နှစ်
ကျော်ဟုန်း ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၃ သစ်ပြန်ပြီ ပိတောက်ရယ် မှော်ဆရာရဲ့ ဝှက်ဖဲကို မျှော်ရင်း တို့ များ အာရုဏ်မသစ်ချင်ဘူး ခေါင်းပြူလာစ နေဝန်းသစ်ကို အားအင်ရှိတဲ့လက်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ချင်တာပါ၊ သစ်ပြန်ပြီ ပိတောက်ရယ် အမှိုက်ပုံထဲ ရောက်သွားတဲ့ အဟောင်းတွေ ပြတိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့ အဟောင်းတွေ မျိုးကွဲတွေ မြိုချရင်း သစ်ခဲ့ပြန်ပေါ့ အရေခွံလဲပြီးစ အပျိုမ အလှနဲ့အဆိပ်တွေ ထပ်ပြင်းပါရစေလေ၊ သစ်ပြန်ပြီ ပိတောက်ရယ် ငါတို့အာရုဏ်ဦးက ပါဝါမျက်မှန်ထူကြီးကို တပ်လို့ ပေါ့ ကျည်ကာအင်္ကျီလဲ သူဝတ်ထားပါရစေတဲ့ ဗီတာမင် အေတူဇက်ကို ဆောင်မြဲအတိုင်းဆောင်ရင်း ရှေ့ နောက်ဝဲယာအားလုံးကို လက်ဝှေ့ ပြုံးပြရှာတယ်၊ သစ်ပြန်ပြီ ပိတောက်ရယ် ဝတ်စုံသစ်နဲ့ ...
Page 177 of 201«1...175176177178179...201»